Studying in Bangkok @ Myanmar Training.com
� Studying in United Kingdom
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားခြင်း .
British Council နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
British Council က သင်တက်ရောက်နိုင်သော ဘာသာရပ်များကိုအကြံပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သွား ရောက်လေ့လာ နိုင်သော Information Centres များလည်းရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်တော်များများတွင်လည်း အင်္ဂလန်ပညာရေး ဆိုင်ရာပွဲတော်များကိုလည်း ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားရေးနှင့် နေထိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရန် လည်း အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ British Council လိပ်စာများကို http:// www.britishcouncil .org/new/index.htm or http://www.educationuk.org တွင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
အင်္ဂလန်သို့မရောက်ခင် တတ်နိုင်သမျှ အင်္ဂလိပ်စာကို ကြိုးစားပမ်းစားလေ့လာထား သင့်သည်။ မသွားခင် IELTS ကဲ့သို့သော စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုနိုင်ပါ သည်။ ၎င်းစာမေးပွဲများက သင်၏အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်အတန်းကို ဆုံးဖြတ် ပါလိမ့်မည်။ အချို့ courses များကို တက်ရောက်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသော grade ရရှိ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
အင်္ဂလန်တွင် နေထိုင်၊ပညာသင်ကြားရာတွင်ကုန်ကျမည့် အကြမ်းဖျင်းစရိတ်
ကျောင်းလခအပါအ၀င် နေထိုင်စရိတ်များကိုအကြမ်းတွက်ထားသင့်သည်။ အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်တွင် ပညာ သင်ကြားလျှင် home fees or overseas fees ပေးရမလားဆိုသည့် အချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားရန် လိုအပ်သည်။
မသွားခင် ဘဏ်တွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီစဉ်မှုများပြုလုပ်ထားပါ ...
- သင်၏ ငွေစာရင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသော bank statement များကို တောင်းပါ။ သင့်တွင် နေထိုင်စရိတ်နှင့် ကျောင်းလခများအတွက် ငွေ ကြေး လုံလောက်သည်ဆိုသော အချက်ကို Immigration Officers များထံသို့ အထောက်အထား ပြရမည်။
- ငွေသားနှင့် ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များကို မှာပါ။ ချက်လက်မှတ် နံပါတ်များကို ချရေးထားပါ။ ငွေသားများကို သင်နှင့်အတူ တပါတည်း မယူ သွားသင့် ပေမယ့် ဘဏ်သို့မသွားခင်ထိ စရိတ်များလောက်လောက်ငင ရှိဖို့လိုအပ်သည်။ ငွေသားများကို လည်း ပေါင် ၅၊၁၀၊၂၀ တန် ငွေအကြွေ များလဲပေး နိုင် သလားမေးပါ။ ပေါင် ၅၀ တန် ငွေစက္ကူများသည် အသုံးပြုရခက် နိုင်ပါ သည်။ ဈေးဆိုင်လေးများနှင့် အငှားယာဉ်များက လက်မခံပါ။ အင်္ဂလန်ရှိဘဏ်တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခွင့်ရလျှင် ဘဏ်စာရင်း ဖွင့် ရန်နှင့် ငွေလွှဲရန် အချိန်ယူရပါ လိမ့်မည်။
- အင်္ဂလန်တွင် Credit Card (e.g. Visa or MasterCard) ရှိလျှင် အဆင်ပြေပါသည်။ မရှိသေးဘူးဆိုလျှင် ဘဏ်တွင် လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။ ရှိပြီး သားဆိုရင်တောင်မှ သင့်ဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်သင့်သည်။
ပညာသင်ကြားရန်စီစဉ်ပြီးပြီဆိုလျှင် သင့်တော်သော နေရာရှာဖွေရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများက အကူအညီ ပေးနိုင်သလား ဆိုသည်ကို မေးမြန်းပါ။ နေစရာနေရာတွေ့တွေ့ချင်း လိပ်စာ၊အချိန်ကာလနှင့် ပတ်သက်သည့် အတည်ပြုစာကို တောင်းယူပါ။ အင်္ဂလန်တွင် အချိန်ကြာကြာနေသော တစ်ချို့ကျောင်းသားများက နေရာအတွက် တစ်လစာ၊ နှစ်လစာပဲ ပေးနေကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နေစရာနေရာများကို မိမိဘာသာရှာဖွေကြသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ ရောက်သောအခါ သင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်သည့် အာမခံများ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ၆ လကျော်ကြာပညာသင်ပြီးလျှင် public health system (National Health Service) ကို free အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင့်အခန်းတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို အာမခံပြုလုပ်ထားလျှင် မတော်တဆဆုံးရှုံးမှုများ အပျက်အဆီးများနှင့် သူခိုး အန္တရာယ် တို့မှ အာမခံရနိုင်သည်။
မသွားခင်အနည်းဆုံး တစ်လအလိုတွင် အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန် (သို့) သွားဆရာဝန်နှင့် ပြပါ။ အင်္ဂလန်သို့ မသွားခင် ဆေးထိုးရန်လိုအပ် သလား ဆိုသည်ကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်ထံမှ သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများ၊ လိုအပ်မည့် ဆေးဝါးများကို ရေးထားပေးသော စာကို တောင်းပါ။ လိုအပ်လျှင် ဆေးများ ယူသွားပါ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ ဆေးများသည် သင်ပုံမှန်အသုံးပြုနေသော ဆေးများနှင့် မတူနိုင်ပါ။ တစ်ချို့ ဆေးများကို အင်္ဂလန်သို့ ယူသွား၍မရပါ။
in united kingdom tips အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားခြင်း
Nilai International College Malaysia No. 196,GF, Boyoke Aung San Rd, Botathaung,Yangon, Myanmar. Tel : 245 663 , 246 776 , 294 200
Mentor International Office
B-96/98 Pansodan Street, Kyauktada, Yangon, Myanmar. Tel : 372 835 , 240 116 , 245 000
International College Sigapore No. 196,GF, Boyoke Aung San Rd, Botathaung,Yangon, Myanmar.
Tel : 245 663 , 246 776 , 294 200